IBSA DHAABA ULFO/THBO IRRAA KENNEME -
IBSA DHAABA ULFO/THBO IRRAA KENNEME
UNITED LIBERATION FORCES OF OROMIA (ULFO)
Guyyaa: Caamsa 10/04/2013
BILISUMMAA UMMATAATIIF FI WALAABUMMAA OROMIYAATIIF KAN QABSAAWU HOGGANNI DHAABAA ULFO/THBO HAARAYNI, JIDDUU GALEEYSA HOGGANA QABSOO BIYYA AMBAA HIN GODHATU!
Falmaan abbaa biyyummaa Oromiyaa, jiddu galeeysa hoggana qabsoo Awrooppaa ykn Ameerikaa (USA) godhatee qabsoo bilisummaa hin jalqabu. Garuu yeroo as dhihoo kanatti kan mul\_’ataa dhufe faallaa isa kanaati. Qabsoo bilisummaa Oromoo kan lubbuu gootoota meeqaatiin bosona Oromiyaa keeysatti biqilte biyya ambaatti galchanii Saarukha intarneetaa game (tapha) joollee fakkeeysuun hin danda\_’amu. Ummatni Oromiyaatiis qabsoo akkasii hin barbaadu. Wal hubachiisuuf, yeroon ammaa yeroo ajandaan dhooysaa kan Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keeysatti dhokattee qabsoo qancarsaa ture ifa if baasee saaxilamaa jiruu. Kanaaf, yeroon tun yeroo biyya ambaa keeysaa waan qaamni tokko hojjate himachaa cubbuu xibaaranii hawaasa dogoggorsiisanii miti. Yeroo roga hundaan gara biyyaatti fuulleffannee diinarratti qabsooynu. Ijoon dubbii ibsa kanaa eenyummaa hoggana dhaaba ULFO Oromiyaa keeysaa qabsoo hidhannoo finiinsaa jiru hawaasa Oromoo hubachiisuu irratti fulleffata. ULFOn Uumama isa irraa kaasee hanga ammaatti bu\_’aa bahii gara garaa keeysa qaxxaamuruun sadarkaa sadaffaa irra jira. Isaaniis:
1, ULFO bara 2000 keeysa labsame: Kun kan dhaabbiilee Siyaasaa Oromoo ilaalcha gara garaa qaban walitti fiduun bifa Agoobaraatiin magaalaa Asmaraatti ijaarame. Yeroo sanitti ummanni Oromoo hedduu gammaduus turtii ji\_’a afuriitiin booda hawwiin ummataa abjuu tahee hafe. Kanaaf, sababa kan tahan kanneen sharriifi iftuultummaan isaan keeysatti maryreen (margeen) sakaalamee labsamuu fi diigamuun wal faana tahee ture.
2, ULFO bara 2010 ti jaaramees, namoota harcaatuu dhaaba tokko yookiin lama irra walitti dhufanii nuti ULFO ifiin jechaa turani. Baay\_’inni namoota kanaa lakkoofsaan kudhan(10) kan hin geenye. Namoonni kun yeroo takkaafillee bifa qabsoo kamiinuu if dura sossoosanii hin beekan. Dhaaba itti dabalamanii yeroo gabaabaaf waliin turan keeysattiis taanaan irratti hojjatanii dhaaba san guddisuu irra diiganii hiddaan buqqisuun, dhaabaas dhabamsiisanii ifiifiis harca\_’anii dirretti hafuun isaanii eenyuufille ifaadha. Namoonni kun yeroo ammaa biyya Ameerikaa (USA) keeysaa nuutu ULFO dha, jechaa jiran kun “harka hanna bare dooluutu sossooha ykn Afaan dubbii bare mooqaa alanfata” Akkuma ja\_’amu san tahee hawaasa Oromoo biyya ambaa keeysa jiraatu dogoggorsuuf yoo tahe malee, wanti isaan hoggonaa jiran tokkolleenuu hin jiru.
3, Dhaaba ULFO/THBO kan bara 2012 irratti heeraa fi seera guutuun labsame: Dhaabni kun, yeroo Qabsoon Bilisummaa Oromoo haalaan laaffattee, gara diigamutti deemuun haalli tokko tokko mul\_’ataa dhufetti hundeeyfamuun waan dhaaba kana kanneen duraarraa adda taasisu. Kuniis, qabsoo lubbuu fi qabeenyi ummata Oromiyaa hedduun itti bade kana dhabama irraa hanbisuuf itti yaadamee kan bifa haarayaan hundeeyfame. Dhimma kana irratti marii yeroo dheeraa godhameen booda Aangafaticha qabsoo bilisummaa Oromoo kan tahe Sooreeysa Janaraal Jaarraa Abbaa Gadaa waliin tahuudhaan U.L.F.On haarayatti dhaaba Siyaasaa guutuu tahee akka qabsaawu guyyaa 20/02/2012tti labsamee.
Aangaftichi QBO Sooreeysi Janaraal Jaarraa Abbaa Gadaa akuma dargaggummaa umrii isaaniitti QBO biqilchanii turan, du\_’a isaaniitiin durattiis moggaasa maqaa ULFO/THBO kan harcaatuu murna shiraatiinillee qaadhimamuu jalqabe gara Dhaaba guutuutti jijjiiranii turan. Akkuma dhaaba kana hundeeysaniin eeybisanii dhaloota haarayaaf dabrsuudhaan boqonnaa QBO haaraya bananii wareegaman. Dhaabni kun hujii bara tokkoo keeysatti human waraanaa bifa, tooftaa fi tarsimoo haarayaan kutaalee Oromiyaa hedduu keeysatti ijaaruudhaan diina (Nyaapha) Oromiyaa haleeluu itti fufee jira.
Hogganni dhaaba kanaatiis gooticha humna waraana ULFO wajjiin lafa Oromiyaa keeysa warraaqaa jira. Biyya ambaa keeysatti kan maadheyfatuuf sababni tokkolleen hin jiru. Namoonni Ameerika (USA) keeysa taa\_’anii nuutu ULFO dha, jechaa jiran kun hoggana dhaaba ULFO haaraya kana waliin hariiroo tokkollee kan hin qabne tahuu isaanii lammiilee keenya kan bilisummaafii walaabummaa biyya Oromiyaatiif quuqaman hundaaf dabarsina. Nu duukaa buutanii sochii keenya hordofuuf kan barbaaddaniif gara bakka bu\_’oota koonyaalee dhaaba ULFO/THBO kan naannoo keeysanitti argamurraan nu hordofuu kan dandeeysan tahuu kabajaan isin hubachiifna.
Odeeffannoo dabalataa: E-mail: ulfo2012@yahoo.ca or Info.ulfo2012@gmail.com
Tags Ibsa THBO ULFO UNITED
Previous Gaafii fi deebisaa Radio Addis dimts waliin Dubbataa Dhaaba ABO Kamaal Galchuu waliin guyyaa 13/04/2013 tti geggeeyfame
Next Guyyaan Gootota Oromoo Oromiyaa keessatti uummata oromoon qophiilee garaa garaan kabajame